Oge Ọgụgụ: 4 nkeji An-akpali akpali nke na-eme njem ná mba ọzọ bụ unpredictability nke ahụmahụ. Mgbe ị na-aga mba ọzọ, ị ga-gụrụ dị iche iche omenala, ntọala, na ahụmahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eme nnyocha ụfọdụ, ejiri n'aka na ụfọdụ ga-ewere gị na mberede…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Europe bụ ma ama n'etiti ndị ọzọ ihe n'ihi na ya ụkpụrụ ụlọ na akụkọ ihe mere eme ebe obibi nke nwere akụkọ ihe mere eme dị mkpa na ụwa. Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World. Noravank,…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ọ bụrụ na ị na-eche ebe-ahụ na nke kacha mma ngosi ihe mgbe ochie na Europe, anyị ị kpuchie! Ma ọ bụ art, mba, ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme, ngosi ihe mgbe ochie site na ndepụta anyị na-aghaghị itu n'anya ị. Ihe ọzọ bụ na, nwere ike iru ụgbọ ala ndị a niile…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Germany bụ ndammana a mara mma mba. Ma mgbe ị na-amalite na-eche banyere castles, ị ga-n'anya ya ọbụna karị. Na ihe nile nke na n'ihi na Germany bụ, dị ka ọtụtụ, nnukwu ụlọ isi obodo nke ụwa. O nwere ọtụtụ ụlọ ndị ama ama na Germany…